Trump oo ka badbaaday maamuus ka xayuubin
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ka badbaaday in uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay taariikhda Mareykanka ee ay maamuus-ka-xayuubin ay ku sameeyaan labada aqalk ee Koongareeska, kaddib marki ay xubnaha Jamhuuriga ah ee Golaha Senate-ka ku hogoogteen.
Dimoqraadiyiinta oo leh aqlabiyadda Golaha Senate-ka, ayaa u baahnaa inay helaan 17 xildhibaan oo Jamhuuri ah, taasoo macnaheedu noqon laheyd in saddex qeybood laba qeyb oo ka mid ah Golaha Senate-ka ay madaxweynihii hore ku heshay danbigi lagu soo oogay oo ahaa, kicin fal lagu ridi rabay dowladda.
50-ka mudane ee dimoqraadiga ee ku jira Senate-ka ayaa waxaa ku biiray 7 Jamhuuri ah, sidaasi daraadeedna kuma filnaan in ay Trump danbi ku helaan, taasoo ka dhigan in Golaha Senetka uu wax danbi ah ku waayay madaxweynihi hore ee Mareykanka Donald Trump.
Hogaamiyaha xubnaha laga tirada-badanyahay ee Senate-ka, Mitch MCconnel ahna hogaamiyaha mudanayasha Jamhuuriga ee Golaha Senate-ka ayaa sheegay inuusan shaki ku jirin, in Trump uu masuul ka ahaa weerarkii 6-di Janaayo loo geystay xarunta Koongareeska, balse ay sharci darro tahay, in xil-ka-qaadis lagu sameeyo madaxweyne xilkiisu dhamaaday.
Trump ayaa hadda qaanuuniyan awoodi kara inuu mar kale isu soo taago xilka madaxweynaha, sidoo kale wuxuu heli karaa xuquuqda ay helaan madaxweynayaashii hore ee Mareykanka.